Switzerland: MuSwitzerland, vanaamai vane makore anopfuura 35 mune imwechete pakuberekwa vatatu - TELES RELAY
HOME » pasi rose Switzerland: MuSwitzerland, vanaamai vanopfuura makore anopfuura 35 kune mumwe chete pakuberekwa vatatu
Switzerland: MuSwitzerland, vanaamai vanopfuura makore anopfuura 35 kune mumwe chete pakuberekwa vatatu
Ava vakadzi vakuru 30 kuna 34 makore kuti kupa zvakawanda kubereka nhasi sezvo zera boka pakati 25 29 makore uye akanga Inonyanya kubata 1970, anoratidza Nhamba dzinosunungurwa nhasi neHerald Statistical Office. Izvo zvinobva kune 85'990 kutora kunyoresa muzvipatara. Kuberekwa kumusha kana kuti kurapwa hakubvunzwi.
Paavhareji, vakadzi vanopedza mazuva e4,3 mune zvivako: Mazuva 3,7 kuvanhu vakaberekerana vakadzi uye mazuva 5,4 kune avo vakaberekerwa nechikamu chekudya.
Nguva yevakadzi pawakaberekwa yakaramba ichingowedzera kubva makore e1970. [Pasi - FSO]
Chimwe chetatu chemasikati
Mumwe mwana akaberekerwa muC2017 kubva kune vatatu akaberekwa nechikamu chekudya, chiyero mudiki zvishoma (-1,4%) ichienzaniswa nepamusoro we 33,7% yakawanikwa mu 2014. Ichi chiyero chakakwirira mukuenzanisa neEurope, sezvo Italy chete inopfuura ichi chiyero (35%). Kune rumwe rutivi, kungopfuura 15% yevana vanoberekwa nechikamu chekudya muNordic nyika.
>> Verenga pamusoro pazvo:
Gynecologists anonyevera nezve "chirwere chinokonzera chirwere"
Munzvimbo iyi, panewo simba cantonal kusaenzanirana, pamwe prices pedyo 40% muna Glarus, Trem uye Zurich, nepo idukusa 25% muna cantons shanu, kusanganisira Valais, uye kunyange asingasviki 20% muna the Jura. In zvose chiFrench cantons uye Ticino, mwero iri pazasi National avhareji.
Muchikamu chiduku chinopfuura chimwe chete kubva kune maviri, chikamu chekuvharidzirwa chinonzi chinonyanya, kureva kuti chakange chagadzirirwa pachine nguva pane pane kuberekwa nekuda kwematambudziko. IFSO inotaurawo kuti mishonga inoshandiswa zvakanyanya kune vakadzi vane hutano hwehutano huri humwe (45,6% yavo, pamwe ne30,7% kune avo vasingaiti).
Mukuenzanisa kweEurope, chiyero chechikamu chekudzivirira chiri kumusoro kuSwitzerland. [Pasi - FSO]
Iko kusungirwa kwepineineum kunoratidzika
The episiotomy kana perineal incision kuti zviite kusununguka, ungaderedza yekudyidzana kubva 2012, 24,9 kubva 17% kusvika% muna 2017. Iko kushanda kwave kuchiitwa nguva dzose, asi izvi zvinowedzera kuve mubvunzo. In dzakafanana, perineal misodzi rokutanga uye rechipiri dhigirii, zvishoma chakakomba, ikawanda inenge 4%, ukuwo rents vari dhigirii rwechitatu norwechina hadziwanzowaniki, uye kunyange kwazvo zvishoma.
Pano zvakare, kune zvingangosiyana. Muna 2015-2017 makore, sezvinoitwa caesarean chikamu, chikuru episiotomy prices zvakanyorwa mune cantons pamusoro Glarus (30,9%) uye Trem (30,8%), chete kuti kupfuura 25%. Kusiyana naizvozvo, chiyero ichi chakange chave pedyo kana kuti chiduku kupfuura 10% muBhowald uye Uri. Kunze kweValais, zvikamu zvese zvekutaura chiFrench zviri pamusoro pevhareji yenyika.
MAD / Vic
Nyaya iyi yakatanga kutanga https://www.rts.ch/info/suisse/10440411-en-suisse-les-meres-ont-plus-de-35-ans-lors-d-une-naissance-sur-trois.html
India: Vokune dzimwe nyika vanotyisidzira vhoti mu Varanasi: Mayawati | India News